Dhammaan wixii ku saabsan Isku-darka Lab-Beagle Lab - Taranka
Dhammaan wixii ku saabsan Isku-darka Lab-Beagle Lab
Maxaa dhacaya markaad isku darto shakhsiyadda la jecel yahay ee Labrador Retriever iyo xirfadaha ugaarsiga ee Beagle?
Waxaad heleysaa isku-dhafan saaxiibtinimo, fudud oo tababar ah oo loo yaqaan 'Beagle Lab Mix', oo sidoo kale loo yaqaan Labbeagle, Labbe, ama Beagador. Noocyadan isweydaarsiga ahi waa daacad ah oo debecsan waxayna u sameystaan ​​xayawaan guriyeed weyn.
Aynu ogaanno sababta iskutallaabta Beagle-Lab ay tahay mid ka mid ah eeyaha caanka ah ee caanka ah maanta.
Waa maxay isku darka shaybaarka Beagle?
Muxuu u eg yahay isku darka sheybaarka Beagle?
Jacayl jacayl, firfircoon
Daryeelka shaybaarka iyo isku-darka Beagle: waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Ma jiraan arrimo caafimaad oo isku dhafan shaybaarka Beagle?
Xagee ka heli kartaa Labbe yar yar?
Raadinta Beagle Shaybaarka isku darka korsashada
Isirkan isku dhafan miyuu yahay eeyga kugu habboon adiga?
Isku darka Beagle iyo Shaybaarka ayaa ah jiilka ugu horeeya ee a Labrador dib u habeyn (Shaybaarka) iyo Gorgor .
Labbes guud ahaan waa eey saaxiibtinimo, firfircoon, iyo eeyo hibo badan leh, laakiin dhaqankooda iyo muuqaalkoodu wuxuu noqon karaa lama saadaalin karo , iyadoo kuxiran astaamaha ay ka dhaxlaan waalidkood daahir.
Si aad wax badan uga ogaato Beagador, waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato waalidnimadiisa marka hore.
Shaybaarka ayaa markii hore lagu cuni jiray magaalada Newfoundland ee dalka Kanada waxaana badanaa loo isticmaali jiray ugaarsiga shimbiraha biyaha . Dabeecadooda awgeed eeyaha shaqeeya , Soo-celiyayaashani waa kuwo caqli badan, adeecsan, oo jecel inay ka farxiyaan milkiilayaashooda.
Eeyahaani waxay sii ahaanayaan wehel wanaagsan oo canine ah maanta. Kuwa ay shakhsiyad dabacsan waxay ka dhigtaa iyaga eeyo hage u ah indhoolayaasha iyo xayawaanka adeegga dadka baahan.
Sababtooda awgeed saaxiibtinimo dabeecadda , Sheybaarada ayaa ahaa nooca ugu caansan ee 2018 , sida laga soo xigtay AKC.
Beagle-ka ciyaar badan
Taariikhda Gorgorku wali wuu yara xanaaqsan yahay. Nooca casriga ah ayaa dib loo raadin karaa ugaarsi yaryar loo isticmaali jiray in lagu raad raaco hare England gudaheeda 1500s.
Eeyadan ayaa caan ku ahaa ugaarsadayaasha xilligaas; ay ugu wacan tahay cabbirka is haysta , Beagles ayaa loo isticmaali karaa xitaa lugta.
Ka dib markii ay ku sii jeedaan Mareykanka Dagaalkii Sokeeye ka dib, eeyadan yar-yar ayaa waxay ku dhufteen ugaarsadeyaal bakayle Mareykan ah, oo jeclaa taranka dareenka urta iyo xirfadaha dabagalka .
Beagadors sida caadiga ah waxay dhaxlaan dhismaha isku-dhafan ee 'Beagle'. Isu-geyntaas badankood waxay leeyihiin a sanka oo cidhiidhi ah iyo dhegaha wejiga wejiga ka laalaada.
Isku darka sheybaarka Beagle ayaa leh jaakad jilicsan, cufan dhogorta gaaban, oo ku imaan kara midabyo sida caddaan, cagaar, madow, jaalle, shukulaato, oranji, iyo casaan. Qaar ka mid ah xitaa waxaa laga yaabaa inay leeyihiin saddex-midab ama jaakad biriij.
Immisa ayey qaadan karaan eeydan?
Isku darka sheybaarka Beagle waa a dhexdhexaad ah isweydaarsi.
Si buuxda u koray, Beagador wuu istaagi karaa 19 ilaa 24 inji (48 ilaa 60 cm) dherer ah oo celcelis ahaan culeyskiisu yahay 25 ilaa 40 rodol (11 ilaa 18 kg).
Iyada oo ay le'eg tahay, isku-dhafkan wuxuu ku habboonaan karaa meelaha yar yar ee lagu noolaado sida guryaha.
Si kastaba ha noqotee, wuu sameyn doonaa u baahan boos fara badan inuu ordo oo wax baadho. Waxaad u baahan doontaa inaad u kaxeyso beerta eeyga ugu yaraan hal mar maalintii si aad u siiso hawo nadiif ah iyo iftiinka qorraxda.
Wuxuu ugu farxad badnaan doonaa guri uu la joogo dayr waasac ah halkaas oo uu si xor ah ugu dhaqaaqi karo. Kaliya iska hubi inaad deyr ku rakibtay gurigaaga si eygaagu u badbaado markii uu ciyaarayo.
Ma yihiin hypoallergenic?
Nasiib darrose, iskutallaabta shaybaarka Beagle waa ma aha hypoallergenic .
Hadaad ku xanuunsato xasaasiyad si aad u qandacdo, markaa noocani iskutallaabta ahi ma noqon karo xayawaanka kuugu fiican. Waxay yeelan karaan jaakad gaaban, laakiin Labbeagles ayaa la kulmi doona daadinta culus marka xilliyadu is beddelaan.
Haddii aad runti qalbigaagu saaran tahay Shaybaarka Beagle, u diyaargarow inaad si joogto ah u isticmaasho faakiyuumlaha. Sidoo kale waad ku sii hayn kartaa hoosta daadintiisa iyada oo loo marayo fadhiyada cadayashada iyo qubayska, kuwaas oo kaa caawin doona inaad ka saarto timo dhintay jaakada eygaaga.
Beagles iyo Labrador Retrievers waxay wadaagaan astaamo badan oo isku mid ah, sidaa darteed isku darka sheybaarka 'Beagle Lab' wuxuu yeelan doonaa shakhsiyad isku mid ah.
Beagador waa xiiso leh iyo feejignaan , had iyo jeer raadiya si uu u baadho hareerahiisa.
Wuxuu jeclaan lahaa inuu waqti ku qaato banaanka iyo inuu raaco urta uu ogaado.
Si lamid ah sida gorgorka, noocyadan iskutallaabta ahi waa kuwo feejigan oo laga yaabo inay noqdaan sarreysa . Laakiin, markay sii gaboobaan, waxay noqon karaan kuwo dulqaad badan oo dabacsan.
Labbiska badankood waxay leeyihiin a ciyaar ciyaar hadana fudud shakhsiyadda, taas oo ka dhigaysa iyaga wehel ku habboon carruurta da 'kasta leh.
Jidhkoodu xoogaa wuu ka adag yahay marka loo eego eeyaha cabbirkooda, sidaa darteed carruurta iyaga waxyeelleeya inta lagu jiro xilliga ciyaarta dhib badan maahan.
In kasta oo ay haystaan ​​tamar badan oo badbaadin kara, isku darka sheybaarka 'Beagle Shaybaarka' sidoo kale wuxuu jecel yahay inuu la qabsado milkiilayaashooda. Waxay yihiin daacad ah oo kalgacal leh , oo waxay rabaan inay ku dhegaan dhinacaaga maalinta oo dhan.
Waxay aad u jeclaan doonaan inay waqti kula qaataan wax badan oo ay la kulmi doonaan kala-go'id walaac marka kaligaa lagaa tago mudo dheer.
Dhibaatooyinka dabeecadeed ee suurtogalka ah ee Beagadors
Sida eeyaha oo dhan, isku darka sheybaarka 'Beagle Shaybaarka' wuxuu la yimaadaa dhaqankiisa dhibka leh.
Marka hore, inta ugu badan iskudhafkaas jecel ciyo . Tani waa wax ay ka dhaxlaan Gorgorka, kaas oo lagu soo barbaaray bay ama cod ku dhawaaq marka ugaarsiga.
Baqashada ka sokow, filo inaad ka maqasho labbeagle baroor iyo cabaad badan. Dhawaaqaas oo dhami waxay noqon karaan dhibaato haddii aad u baahan tahay nabad iyo xasillooni guriga ama haddii aad deriskaaga ugu dhow deggan tahay.
Fiiri shaybaarkaan 'Beagle Lab' oo u ciyaaraya seeriga:
Dhibaato kale oo aad kala kulmi karto noocan isweydaarsiga ah waa kan ugaadhsade sare . Maaddaama ay yihiin farac ka mid ah laba ugaarsiga ugaarsiga, isku-dhafka Beagle iyo Lab ayaa yeelan doona dareen xoog leh oo lagu eryado xayawaanka yaryar sida bisadaha, bakaylaha, iyo hamster.
Bulsho waxay kaa caawin doontaa inaad eygaaga barato in xayawaanadan yar yar aysan ugaarsi ugaarsanaynin ugaarsiga. Tani waa mid muhiim ah haddii aad leedahay xayawaano kale oo guriga ku jira.
Sidoo kale waa inaad ogaataa in Labbes ay caado u leeyihiin calalinta markay caajis dareemaan. Waad ka hortagi kartaa eeygaaga inuu ruugo kabaha aad jeceshahay ama rooggaaga qaaliga ah adoo u keenaya isaga qaar ka mid ah alaabta lagu ciyaaro oo aad calalinaysid isla markaana aad u hubiso inuu helo dhiirrigelin jireed iyo mid maskaxeed oo ku filan.
Ma ey eey gardarro yihiin?
Dabeecaddooda sarreysa iyo dabeecaddooda ciyaarta, tamarta isku-dhafka 'Beagle Lab' tamarteeda waxay dadka siin kartaa fikradda ah inay yihiin jinsi-gardarraysan.
Si kastaba ha noqotee, eeyahaani waa khalqiga jecel . Marka loo eego dhaxalkooda asxaabta ugaadhsiga, waxay u barteen inay dadka la joogaan oo aan u nugulayn gardarrada.
Sidii aan soo sheegnay, xitaa waxay si wanaagsan ula qabsan doonaan xayawaannada kale, haddii la siiyo waqti ku filan oo ay ku dhex galaan bulshada.
Tababbarka isku darka shaybaarka Beagle
Kaliya maahan in this crossbreed daacad u yahay oo ilaaliya, laakiin sidoo kale waa caqli badan .
Eygan ayaa caqligiisa ka helaya sheybaarka, kaas oo lagu soo daray noocyada ugu caqliga badan adduunka .
Qaar ka mid ah Beagadors, si kastaba ha noqotee, waxay dhaxli karaan wax badan oo ka mid ah Beagle's madaxbanaanida .
Beagle ayaa loo soo saaray inuu raaco dareenkiisa inta uu ugaarsanayo, sidaa darteed looma baran inuu raaco amarrada milkiilayaasheeda.
Wax kastoo waalid ah isku darka shaybaarka Beagle uu qaato kadib, hase yeeshe, waxaad ku bari kartaa dhaqan sax ah adoo adeegsanaya a tababar joogto ah .
Waxay kaloo kaa caawin doontaa helitaanka tababarka bilaabay sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, halka eeygaagu weli yahay kuup. Eydu waxay u muuqdaan kuwo si fudud wax loo bari karo oo way fududahay in la dhex galo marka loo eego eeyaha waaweyn.
Xusuusnow inaad ku abaalmariso eygaaga xoojinta wanaagsan sida daweynta, ammaanta, ama xitaa waxyaabaha ay ku ciyaaraan ee ay jecel yihiin, isla markaana isla markaa gacanta adag ku qabta. Waa inaad adigu iskaa u sameysid sidii alfa markaa isagu ma tartami doono awooddaada markaad amarro bixinayso.
Iyo, xusuusnow, inay muhiim tahay qaado waqtigaaga markaad tabobaraysid shaybaarkaaga. Dulqaadka iyo joogtaynta, gaar ahaan inta lagu jiro heerarka hore, ayaa waddo dheer u mari doona hagaajinta dhaqanka xayawaankaaga.
Bulsheynta ayaa sidoo kale ah qayb muhiim ah oo ka mid ah tababarka eygaaga, waana inay bilaabataa inta lagu jiro eey. U kaxee socod si aad u tagto meelaha dadweynaha sida jardiinada ama hareeraha xaafadda si uu ula qabsado dhammaan aragtida, dhawaaqyada, iyo urta kala duwan.
Waqti qaado si aad ugu soo bandhigto Labbeagle-kaaga xubnaha kale ee qoyskaaga, gaar ahaan xayawaanka kale. Tani waxay xaqiijineysaa in dhammaan xubnahaaga afarta lugood leh ay si wanaagsan u wadaagaan.
Labbe uma baahna waqti badan ama lacag badan markay timaado daryeel; jaakaddeeda gaaban waxay ka dhigtaa mid si fudud loo qurxiyo mana cuni doono sida ugu badan ee jilicsan.
Waxaad u baahan doontaa inaad xoogaa dadaal ah gasho markay tahay inaad siiso jimicsi kugu filan, in kastoo. Halkan waxaa ku yaal faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan daryeelka Beagle iyo Shaybaar isku dhafan.
Sida loo qurxiyo eeygaaga
Dharka gaagaaban dartiis, iskudhafka Lab Beagle way fududahay in la nadiifiyo. Wuxuu haystaa jaakad gaaban, cimilada u adkaysata, wax uu ka dhaxlo waalidkiis.
Koodh dhalaalaya oo caafimaad qaba, Labbe wuxuu u baahan yahay in la cadaadiyo toddobaadle ah . Adeegso timo qurxin ama gacmo gashi si aad si fudud timaha dabacsan uga saarto jaakadiisa.
Ha qaldamin, in kastoo; wuu la kulmaa daadinta xilliyeed mana aha hypoallergenic. Isaga sida caadiga ah wax badan buu daadiyaa marka xilliyadu is beddelaan, markaa u diyaar garow inaad samayso faaruqiin culus dhawrkii biloodba mar.
Sii eeygaaga a qubeys mar ama laba jeer saddexdii biloodba mar . Taasi waa waxa kaliya ee uu u baahan yahay inuu nadiif ahaado; qubayska joogtada ahi waxay qallajin karaan maqaarkiisa iyo jaakaddiisa waxayna sababi karaan dhibaatooyinka maqaarka .
Isku darka sheybaarka 'Beagle Lab' ayaa u nugul caabuqa dhegaha sababo la xiriira dhagahooda. Hubi dhegaha eygaaga ugu yaraan hal mar asbuucii kuna nadiifi kubbadaha cudbiska ah iyo nadiifiye dhakhaatiirtu ansixiyeen.
Maxaa la siiyaa Labbeagle
Iskutallaabta Beagle Lab waa eey firfircoon oo isaga ah cuntada wuxuu u baahan doonaa inuu joogteeyo heerarkiisa tamarta. Wuxuu u baahan doonaa kibble leh a borotiinka sare , ugu yaraan 20% ilaa 25%. Nafaqadu waxay ka caawisaa xoojinta kala-goysyadiisa isla markaana muruqyadiisa caafimaad ku hayaa.
Hilibka xoolaha ku dhisan sida cuntada badda, digaagga cusub, iyo hilibka lo'da dhammaantood waa ilo borotiin aad u fiican oo laga helo qashinkaaga. Hubso inuu liiskiisa liis garayn karo borotiinka marka hore waxyaabaha ku jira.
Noocyadan isweydaarsiga ah waxay sidoo kale u baahan yihiin cunnooyinka eyga oo ay ku jiraan ugu yaraan 15% dufan . Nafaqadu waxay ka caawisaa inay ilaashadaan heerarkooda tamarta waxayna ilaaliyaan maqaarkooda iyo jaakadoodu caafimaad qabaan.
Khudaarta cagaaran sida baradhada macaan ayaa sidoo kale siin doonta tamar tartiib tartiib ah iyada oo aan kicin xasaasiyado suurtagal ah oo aan keenin dhibaatooyin dheefshiidka.
Waalidiinta Labbe-ku waxay u nugulyihiin cunnida xad-dhaafka ah, sidaa darteed waa ammaan in loo maleeyo inuu yeelan doono aragti isku mid ah xagga cuntada. Cabir cuntadiisa oo hubi inuu helo kaliya 1 ½ ilaa 2 ½ koob oo ah kibble qalalan maalin kasta, oo loo qaybiyay laba cunto.
Qiyaasta adeegani way ku kala duwanaan kartaa iyadoo loo eegayo da'da eyga, cabbirka, iyo heerka waxqabadkaaga, sidaas darteed waxaa ugu wanaagsan inaad kala tashato dhakhtarkaaga xoolaha qorshaha ugu fiican ee quudinta Labbeagle-kaaga.
Diyaar u noqo inaad la shaqeyso Beagador
Ha sameynin khaladka ah inaad dhayalsato heerarka tamarta isku dhafka 'Beagle Lab'. Eygan wuxuu ku ciyaari karaa ardaaga maalintii oo dhan isagoon daalin.
Wuu u baahan doonaa ugu yaraan hal saac oo jimicsi ah maalin kasta si ay u siidaayaan dhammaan xooggooda qarsoon oo ay ku sii jiraan qaabka sare. Tixgeli helitaanka nooc kale hadaad rabto eey sariirta kula seexato.
Waxaad ku raaxeysan kartaa nashaadaadyo kaladuwan oo aad ku dhexjirto iskudhafkaaga - ha ahaato socod degdeg ah oo ku wareegsan xaafadda laba jeer maalintii ama dabaal xiiso leh oo ka socda barkadda.
Labbe wuxuu sidoo kale awoodi doonaa inuu la socdo dhaqdhaqaaqyo badan oo soo jiidasho leh sida socodka iyo safarada xeebta . Eeyahaani waxay jecel yihiin dabaasha, iyada oo ay ugu wacan tahay dhaxalkooda Lab.
Isku darka 'Beagle Lab Lab' wuxuu u baahan yahay kicinta maskaxda, sidoo kale, sidaa darteed wuu ku raaxeysan doonaa isboortiga canine sida tababarka dhaqdhaqaaqa iyo dabagalka. Waqti ku qaadashada koorsada xasilloonida kaliya maahan inay siiso ardaygaaga jimicsi ku filan laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad fuliso u hoggaansamida amarradaada.
Haddii aad leedahay daarad, hubi inaad siiso eeygaaga wax badan Xilliga ciyaarta .
Isku-darka Lab iyo Beagle waxay u nugul yihiin arrimaha caafimaadka ee inta badan saameeya waalidkood.
Beagle iyo Labrador labadaba, tusaale ahaan, way u nugul yihiin sinta dysplasia .
Xaaladaha kale ee caafimaad ee Labbe ay wajihi karaan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka indhaha , qalal , hypothyroidism, iyo raaxada patellar.
Tani waxay sidoo kale u nugul tahay buurnaanta ama xajmiga caloosha ee fidinta , Xaalad dhimasho ah oo dhacda marka gaaska xad-dhaafka ah uu kala baxo oo uu rogrogo caloosha.
Hal dariiqo oo lagu yareyn karo halista eygaaga uu ku helo xaaladahaan ayaa ah isaga oo siinaya quudinta habboon . Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan cunnooyinka saxda ah ee caafimaadka ku sii hayn doona:
Karootada, baradhada macaan, buluugga, salmon, iyo tuna ayaa dhammaantood ku jira lutein iyo zinc , taas oo kaa caawin doonta inaad eeyahaaga indhaha ku hayaan qaab wanaagsan.
Midho-badnaan, kibbib hodan ku ah waxay yareyn doontaa suurtagalnimada dhibaatooyinka dheefshiidka.
Miraha iyo khudaarta hodan ku ah antioxidants iyo cuntooyinka karbohidratka yar ku jira ayaa yareyn doona suurtagalnimada kansarka.
Marka laga reebo arrimahan caafimaad, Beagador ayaa sidoo kale u nugul dabo qabow ama cillad jirro cillad . Tani caadi ahaan waxay dhacdaa maalin hawl badan ka dib ama dabaasha biyo qabow ka dib. Ha welwelin; dabada eygaagu wuxuu ku laaban doonaa xaaladdiisa cakiran maalmo yar ka dib.
Raadinta eey isku-darka 'Beagle Lab' eey cusub oo laga helo ilo lagu kalsoonaan karo waxay noqon kartaa caqabad. Kalluumeysatada la aamini karo way adkaan kartaa in la helo, gaar ahaan tan Miliyo yaryar ayaa maalmahan ku soo badanaya.
Waxaad ka heli kartaa isku-darka 'Beagle Lab' eey 'puppy puppy' oo iib ah sida ugu badan $ 600 mid kasta, iyadoo kuxiran abtirsiinta waalidkeed.
Haddii qiimahan uu xoogaa kaa hooseeyo, waxaad kaloo ikhtiyaar u leedahay inaad ka soo korsato hoyga Beagador qof weyn.
Kumbuyuutarrada isku-dhafka ah ee Beagle Lab caan ah
Waxay noqon kartaa wax khiyaano leh in la helo soosaarayaasha diiradda saaraya soo saarista Labbeagles, maadaama aysan u caan ahayn sida iskutallaabyada kale sida Maltipoos iyo Morkies .
Waxa aad sameyn kartid waa inaad la xiriirtaa kuwa soo saara Labrador Retrievers ama Beagles oo fiiri inay leeyihiin wax noocyada kala duwan ee iibka . Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa soo saara ee aad la xiriiri karto:
Lane Rae Beagles - Iyada oo ku saleysan Florida, barnaamijkan 'Beagle' ee barnaamijka 'breager' ayaa jiray tan iyo 2009 wuxuuna bixiyaa Beagles ujeedooyinka xayawaanka iyo muujinta. Bixiyuhu waa 'AKC Breeder of Merit' wuxuuna ku xiran yahay National Beagle Club of America.
Cedar Ridge Beagles - Beeryahankan 'Iowa breeder' wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo arday ah oo loo yaqaan 'Beagle pups', xitaa kuwa yaryar oo leh lilac dhif ah ama jaakad lacag / buluug ah. Waxay ka qaadaan $ 650 eey kasta, oo heli doona wareeggiisa koowaad ee tallaalka ka hor inta aan lagu sii daynin daryeelkaaga.
Labradors Qarsoon - Bixiyuhu wuxuu iibiyaa eeyaha yaryar, shukulaatada, iyo jaalaha yar yar ee ka yimaada New York. Marka laga reebo Shaybaarada tayada-xayawaanka ah, soosaaraha ayaa sidoo kale leh xariiq raadinta iyo eeyaha badbaadinta iyo PTSD iyo eeyaha adeegga.
Prairie Rose Soo Celinta - Beeryahankan Missouri wuxuu diiradda saarayaa bixinta Labrador Retrievers oo horay loogu sii hubiyey xaaladaha sinta iyo xusulka oo aan lahayn qashin. Cunug kasta oo ka mid ah Hawl-gabka caafimaad wuxuu la yimaadaa dammaanad-qaad caafimaad oo 26-bilood ah
Haddii aad qorsheyneyso inaad ka hesho ardaygaaga cusub nalka, had iyo jeer hubi inaad weydiisato midkeeda taariikhda caafimaadka waalidiinta sidoo kale. Ka soo iibsiga Labbeagle abuurka ayaa noqon kara mid qaali ah, markaa hubi inaad hesho qiimaha lacagtaada.
Marka laga soo tago breeder, hab kale oo lagu helo isweydaarsigan ayaa ah samatabbixin mid ka socda hoygaaga deegaanka. Waxaad ku siin kartaa eey guri cusub iyo nolol adiga oo korsanaya.
Samatabbixinta Labbe sidoo kale waa ka qaalisan oo waxaa laga yaabaa inaad nasiib u yeelato inaad hesho eey qaangaar ah oo horeyba loo tababbaray oo ay ku jabeen milkiilayaashiisii ​​hore.
Waa kuwan qaar ka mid ah ururrada samatabbixinta ee aad iska hubin karto:
Baaskiilada SOS - Ururkan aan macaash doonka aheyn wuxuu bixiyaa habab caafimaad sida kala bixida / dheecaanka, microchipping, iyo talaalka Beagles-ka ay u heystaan ​​inay korsadaan. Waxay leeyihiin cutubyo ku yaal Alabama, New Jersey, iyo Tennessee.
Gorgor BREW - Waxaa la aasaasay 1999, ururkan wuxuu u heellan yahay samatabbixinta Beagles ee la soo gudboonaada euthanasia. Waxay rehome beagles u yihiin qoysaska ku nool Virginia, Maryland, West Virginia, Washington DC, Pennsylvania, Delaware, New York, New Jersey, iyo Massachusetts.
Samatabbixinta Shaybaarka ugu Fiican - Samatabbixinta Peak Lab waxay diirada saareysaa yareynta tirada shaybaarada aan loo baahnayn iyo Isku-dhafka Lab ee North Carolina. Ilaa hadda, ururku wuxuu ka badbaadiyey in ka badan 6,000 eeyo deegaanno xadgudub ah iyo hoyga dadka lagu laayo ee aadka u sarreeya.
Samatabbixinta Rocky Mountain Lab - Kooxdan yar ee iskaa wax u qabso ku shaqeysata waxay ka helaan sheybaarro iyagoo u maraya mutadawiciin gabood ka dhigta kuwaasoo uga digaya joogitaanka eeyadan ku sugan guryaha sare ee lagu laayo. Ururkan fadhigiisu yahay Colorado wuxuu leeyahay Labradors waaweyn iyo waayeel ah oo diyaar u ah $ 225 ilaa $ 275.
Shakhsiyadda isku dhafka 'Beagle Lab' shakhsiyadiisu way ku kala duwanaan kartaa eey kasta.
Si kastaba ha noqotee, badiyaa kuwan isweydaarsiga ahi waxay dhaxlaan dabeecadda saaxiibtinimo ee Labrador Retriever iyo xiisaha Beagle.
Sheybaarada ayaa ah ciyaar laakiin jilicsan , taas oo ka dhigaysa iyaga xayawaan ku habboon qoysaska carruurta leh.
Iyaguna waa bulsheed oo kalgacal leh , sidaa darteed waxay jeclaan doonaan inaad isku wareejiso dhinacaaga maalinta ugu dambaysa.
Si kastaba ha noqotee, Beagadors ayaa sidoo kale u baahan doona jimicsi badan . Tani ma noqon karto eey aad u weyn milkiilaha markii ugu horreysay, maadaama uu qaadan doono waqti badan oo jimicsi iyo tababar ah.
Maxaad u malaynaysaa isku-darka Beagle-Lab? La wadaag fikradahaaga faallooyinka!
Mountain Feist: Tilmaamaha Taranka ee Dhameystiran (Cabbirka, Eeyaha & Dabeecadda)
Adhijirka Dahabka ah - 14 Waa inuu Aqriyaa Xaqiiqooyinka ku saabsan Isku-dhafkan
cimri dhererka isku darka chihuahua terrier
meeqa waa yorkie shaaha
magacyada eyda ee eeyaha cad
eygu wuxuu dareemayaa kulayl in la taabto